ချစ်သူရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဒါလေးကိုအချိန်ပေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ … – Trend.com.mm
ချစ်သူရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဒါလေးကိုအချိန်ပေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ …
Posted on April 26, 2018 April 9, 2019 by Wint
ကွာရှင်းဖို့ထိလုပ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ့နှစ်ဦးရဲ့ ကြေကွဲစရာပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။
ဒါကြောင့် သင်ဟာချစ်သူရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီပုံပြင်လေးမှာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့အချစ်တွေ၊ လေးစားမှုတွေ၊ အသိမှတ်ပြုမှုတွေဟာ အရေးကြီးကြောင်း ၊ တန်ဖိုးထားသင့်ကြောင်းပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ညနေမှာ မိန်းမဖြစ်သူက ညနေစာပြင်ဆင်နေချိန် ယောက်ျားက လက်ကိုဆွဲပြီးအပြင်ခေါ်သွားတယ်။ ” ကွာရှင်းရအောင် ” တဲ့ ။ ဘာလို့လဲ သူ့ကိုမေးတော့ အဲ့ဒီမေးခွန်းအတွက် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်။ မိန်းမကို သူမချစ်တော့ဘူးတဲ့ ။ နောက်ထပ်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်နေပြီလို့ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ကွာရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သတဲ့။ ကွာရှင်းရင် အိမ်တစ်လုံးနဲ့ သူ့စီးပွားရဲ့၃ဝရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ ကွာရှင်းစာချုပ်ကို သူမတွေ့တော့ အဝေးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ အိမ်ထောင်သက်တမ်းက (၁ဝ)နှစ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ ကွာရှင်းဖို့ကို သူမအနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး။
သူ့ဘက်က ကွာရှင်းချင်နေမှတော့ သူမလည်းစဉ်းစားတယ်။ ကွာရှင်းချင်ရင်တော့ တစ်ခု
တော့လုပ်ပေးရမယ်။ သူပေးမယ့် အိမ်တွေ ၊ ဘာတွေလည်း မလိုချင်ဘူး ။ အချိန် (၁)လပဲပေးပါလို့ တောင်းဆိုတယ်။ အဲ့ဒီ (၁)လအတွင်းမှာ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ နေပေးပါ။ သားလေး စာမေးပွဲရှိနေတဲ့အတွက် မိဘတွေကြောင့် သူ့ရဲ့စာမေးပွဲမထိခိုက်စေချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နေ့ကလို အခန်းထဲကို သူမကိုပွေ့ချီပြီး ခေါ်သွားပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုထားတယ်။
ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ သူ့မိန်းမရူးနေပြီလို့ တွေးမိသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်းဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ပထမတစ်ရက် သူ့မိန်းမကိုပွေ့ချီပြီး အခန်းထဲကိုခေါ်သွားပေးတယ်။ သားလေးကတော့ မိဘနှစ်ယောက်အဆင်ပြေနေတယ်ပဲထင်ပြီး အနောက်မှာတိတ်တိတ်လေးခိုးရယ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးကို ကွာရှင်းဖို့ကိစ္စမပြောပြပါနဲ့လို့ သူ့ကိုထပ်တောင်းဆိုလိုက်တယ်။
နောက်ထပ် (၂)ရက်လောက်ကြာတော့ မိန်းမမှာ အဆီတွေနဲ့ အသက်လည်းမငယ်တော့ဘူး။ အရေးကြောင်းတွေ၊ ဆံပင်တွေဖြူချင်လာတာကို သူသတိထားကြည့်နေမိတယ်။ ဒါတွေကပဲ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတာလား ?
(၁ဝ)ရက်လောက်ကြာပြီးနောက်မှာ သူတိုနှစ်ယောက်ကြား အေးစက်မှုတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းအရည်ပျော်လာတယ်။ မိန်းမဝိတ်တွေတက်လာတာ ၊ အရင်လို လှပနုပျိုမှုတွေအရောင်မှေးမှိန်လာတာ သူသတိထားမိတာပေါ့။ ဒီတစ်ခါတော့ အခန်းထဲ သူ့မိန်းမကို ပွေ့ချီသွားတဲ့ခံစားချက်ဟာ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကလိုပဲ။ စိတ်တွေပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူမအပေါ် သူ့ရဲ့အချစ်တွေရှိနေသေးပြီး အရာရာဟာအရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုလည်း ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စအသေးမွှားလေးတွေလိုသာ သဘောထားလိုက်တယ်။
နောက်တစ်၂ရက်ကြာတော့ မိန်းမအတွက် ပန်းစည်းလေးဝယ်ပေးပြီး ကတ်လေးပေးလိုက်တယ်။ ကတ်ထဲမှာ “I will carry you every morning until death parts us.” လို့ရေးထားတယ်။
ချစ်တဲ့မိန်းမရှိရာ အိမ်ကိုပြန်သွားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး လှေကားပေါ်အတက်မှာ သူမကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ သူမ မရှိတော့ဘူး။ အသက်မဲ့နေတဲ့ သူမခန္ဓာကိုယ်လေးသာကျန်ရှိနေခဲ့တယ်။ သူမမှာ ကင်ဆာရောဂါရှိနေပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေတာတောင်မသိရလောက်အောင် သူအရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။ သူမလည်း သေရမယ်ဆိုတာကိုသိနှင့်ပြီးသားပါ။ တစ်လအချိန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း သူတို့သားလေးဆီမှာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမှတ်တရဆိုးတွေမရှိစေချင်လို့ပါ။ သူ့ရဲ့အဖေကို အမေအပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းအဖြစ်သာ မြင်စေချင်တဲ့ စေတနာတစ်ခုပဲ သူမမှာရှိခဲ့ပါတယ်…
Relationship တစ်ခုမှာ သေးငယ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကားကြီးတွေ၊ စည်းစိမ်ကြွယ်ဝမှုတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူအပေါ် တန်ဖိုးထားပါ။ လစ်လျုမရှုပါနဲ့ ။ မင်းသတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းနောက်ကျသွားလို့ နောင်တရနေရင် ဘာမှမထူးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခွင့်ရေးရှိတုန်းလေး ကြိုးစားပြီး အသိမှတ်ပြုပေးပါ။
ကှာရှငျးဖို့ထိလုပျခဲ့တဲ့ ဇနီးမောငျနှံ့နှဈဦးရဲ့ ကွကှေဲစရာပုံပွငျလေးတဈပုဒျပါ။
ဒါကွောငျ့ သငျဟာခဈြသူရှိသညျဖွဈစေ၊ မရှိသညျဖွဈစေ ဒါလေးကိုဖတျကွညျ့လိုကျပါ။ ဒီပုံပွငျလေးမှာ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြက လူတှရေဲ့အခဈြတှေ၊ လေးစားမှုတှေ၊ အသိမှတျပွုမှုတှဟော အရေးကွီးကွောငျး ၊ တနျဖိုးထားသငျ့ကွောငျးပွောပွထားတာဖွဈပါတယျ။
တဈညနမှော မိနျးမဖွဈသူက ညနစောပွငျဆငျနခြေိနျ ယောကျြားက လကျကိုဆှဲပွီးအပွငျချေါသှားတယျ။ ” ကှာရှငျးရအောငျ ” တဲ့ ။ ဘာလို့လဲ သူ့ကိုမေးတော့ အဲ့ဒီမေးခှနျးအတှကျ တိတျဆိတျနခေဲ့တယျ။ မိနျးမကို သူမခဈြတော့ဘူးတဲ့ ။ နောကျထပျမိနျးမတဈယောကျနဲ့ ခဈြကွိုကျနပွေီလို့ ပွောတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကှာရှငျးဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျသတဲ့။ ကှာရှငျးရငျ အိမျတဈလုံးနဲ့ သူ့စီးပှားရဲ့၃ဝရာခိုငျနှုနျးကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရှိမယျလို့လညျးပွောပါတယျ။ ကှာရှငျးစာခြုပျကို သူမတှတေ့ော့ အဝေးကိုလှငျ့ပဈလိုကျတယျ။ အိမျထောငျသကျတမျးက (၁ဝ)နှဈလောကျရှိနပွေီဆိုတော့ ကှာရှငျးဖို့ကို သူမအနနေဲ့ လကျမခံနိုငျခဲ့ဘူး။
သူ့ဘကျက ကှာရှငျးခငျြနမှေတော့ သူမလညျးစဉျးစားတယျ။ ကှာရှငျးခငျြရငျတော့ တဈခု
တော့လုပျပေးရမယျ။ သူပေးမယျ့ အိမျတှေ ၊ ဘာတှလေညျး မလိုခငျြဘူး ။ အခြိနျ (၁)လပဲပေးပါလို့ တောငျးဆိုတယျ။ အဲ့ဒီ (၁)လအတှငျးမှာ ဘာမှမဖွဈခဲ့သလိုပဲ နပေေးပါ။ သားလေး စာမေးပှဲရှိနတေဲ့အတှကျ မိဘတှကွေောငျ့ သူ့ရဲ့စာမေးပှဲမထိခိုကျစခေငျြဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ ပွီးတော့ မင်ျဂလာဆောငျပွီးတဲ့နကေ့လို အခနျးထဲကို သူမကိုပှခြေီ့ပွီး ချေါသှားပေးဖို့လညျး တောငျးဆိုထားတယျ။
ယောကျြားဖွဈသူကတော့ သူ့မိနျးမရူးနပွေီလို့ တှေးမိသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ တောငျးဆိုတာကိုလကျခံလိုကျပါတယျ။ ပထမတဈရကျ သူ့မိနျးမကိုပှခြေီ့ပွီး အခနျးထဲကိုချေါသှားပေးတယျ။ သားလေးကတော့ မိဘနှဈယောကျအဆငျပွနေတေယျပဲထငျပွီး အနောကျမှာတိတျတိတျလေးခိုးရယျနတေယျ။ ပွီးတော့ ကလေးကို ကှာရှငျးဖို့ကိစ်စမပွောပွပါနဲ့လို့ သူ့ကိုထပျတောငျးဆိုလိုကျတယျ။
နောကျထပျ (၂)ရကျလောကျကွာတော့ မိနျးမမှာ အဆီတှနေဲ့ အသကျလညျးမငယျတော့ဘူး။ အရေးကွောငျးတှေ၊ ဆံပငျတှဖွေူခငျြလာတာကို သူသတိထားကွညျ့နမေိတယျ။ ဒါတှကေပဲ သူတို့ရဲ့အိမျထောငျရေးကို ထိခိုကျပကျြစီးစတောလား ?
(၁ဝ)ရကျလောကျကွာပွီးနောကျမှာ သူတိုနှဈယောကျကွား အေးစကျမှုတှဟော တဖွညျးဖွညျးအရညျပြျောလာတယျ။ မိနျးမဝိတျတှတေကျလာတာ ၊ အရငျလို လှပနုပြိုမှုတှအေရောငျမှေးမှိနျလာတာ သူသတိထားမိတာပေါ့။ ဒီတဈခါတော့ အခနျးထဲ သူ့မိနျးမကို ပှခြေီ့သှားတဲ့ခံစားခကျြဟာ မင်ျဂလာဆောငျတဲ့နကေ့လိုပဲ။ စိတျတှပွေနျပွောငျးလဲသှားတယျ။ သူမအပျေါ သူ့ရဲ့အခဈြတှရှေိနသေေးပွီး အရာရာဟာအရငျတိုငျးပွနျဖွဈသှားတယျ။ ဖွဈခဲ့သမြှကိုလညျး ဘာမှမဟုတျတဲ့ ကိစ်စအသေးမှားလေးတှလေိုသာ သဘောထားလိုကျတယျ။
နောကျတဈ၂ရကျကွာတော့ မိနျးမအတှကျ ပနျးစညျးလေးဝယျပေးပွီး ကတျလေးပေးလိုကျတယျ။ ကတျထဲမှာ “I will carry you every morning until death parts us.” လို့ရေးထားတယျ။
ခဈြတဲ့မိနျးမရှိရာ အိမျကိုပွနျသှားတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီး လှကေားပျေါအတကျမှာ သူမကိုမွငျလိုကျရတယျ။ သူမ မရှိတော့ဘူး။ အသကျမဲ့နတေဲ့ သူမခန်ဓာကိုယျလေးသာကနျြရှိနခေဲ့တယျ။ သူမမှာ ကငျဆာရောဂါရှိနပွေီး နမေကောငျးဖွဈနတောတောငျမသိရလောကျအောငျ သူအရမျးအလုပျရှုပျနခေဲ့တယျ။ သူမလညျး သရေမယျဆိုတာကိုသိနှငျ့ပွီးသားပါ။ တဈလအခြိနျပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တယျဆိုတာလညျး သူတို့သားလေးဆီမှာဒီကိစ်စတှနေဲ့ပတျသတျပွီး အမှတျတရဆိုးတှမေရှိစခေငျြလို့ပါ။ သူ့ရဲ့အဖကေို အမအေပျေါသစ်စာရှိတဲ့ ခငျပှနျးကောငျးအဖွဈသာ မွငျစခေငျြတဲ့ စတေနာတဈခုပဲ သူမရှိခဲ့ပါတယျ…
Relationship တဈခုမှာ သေးငယျတဲ့ကိစ်စလေးတှဟော သိပျအရေးကွီးပါတယျ။ ကားကွီးတှေ၊ စညျးစိမျကွှယျဝမှုတှေ၊ ပိုငျဆိုငျမှုတှကေ အဓိကမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့လူအပျေါ တနျဖိုးထားပါ။ လဈလြုမရှုပါနဲ့ ။ မငျးသတိထားမိလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အရမျးနောကျကသြှားလို့ နောငျတရနရေငျ ဘာမှမထူးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အခှငျ့ရေးရှိတုနျးလေး ကွိုးစားပွီး အသိမှတျပွုပေးပါ။
ပရိသတ်တွေတောင်ဝေခွဲမရဖြစ်သွားတဲ့ Ji Chang Wook ရဲ့ ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီမလုပ်ခင်နဲ့ လုပ်ပြီးပုံ